eHimalaya Online || News from nepal » आज बुधबार भगवान गणेशको दर्शन गर्दै राशिफल पढौ कस्तो रहला त तपाईको दिन ? जान्नुहोस ।
आज बुधबार भगवान गणेशको दर्शन गर्दै राशिफल पढौ कस्तो रहला त तपाईको दिन ? जान्नुहोस ।
२०७८ साउन २७ गते बुधबार ०१:१३
मेष:- वैवाहिक जीवनमा विभेद हुन सक्छ। पारिवारिक समस्याहरुलाई बुद्धिमानीपूर्वक सम्हाल्नुहोस्। काममा सहयोग मिल्नेछ। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ। व्यर्थ खर्च हुनेछ। क्रोध नियन्त्रण गर्नुहोस्। पुरानो रोग फेरी बिग्रन सक्छ। असंगतता...
मेष:- वैवाहिक जीवनमा विभेद हुन सक्छ। पारिवारिक समस्याहरुलाई बुद्धिमानीपूर्वक सम्हाल्नुहोस्। काममा सहयोग मिल्नेछ। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ। व्यर्थ खर्च हुनेछ। क्रोध नियन्त्रण गर्नुहोस्। पुरानो रोग फेरी बिग्रन सक्छ। असंगतता को परिणाम हानि हुनेछ। अकल्पनीय कुराहरु हुनेछन्।
बृष:- खुशी बढ्नेछ। कामको जिज्ञासा बढ्नेछ। राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यमा सफलता प्राप्त हुने सम्भावना छ। ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य आम्दानी हुने सम्भावना छ। बेरोजगारी हट्नेछ। व्यापारिक यात्रा सफल रहनेछ। अप्रत्याशित लाभ हुन सक्छ।
मिथुन:- शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। मूल्य बढ्नेछ। पैसा हुनेछ। थकान हुनेछ। रचनात्मक कार्यमा रुचि बढ्नेछ। आफ्नो ब्यवहारलाई मध्यम राख्ने काम गर्नुहोस्। विवाहको प्रस्ताव प्राप्त हुन सक्छ। साथीहरु को सहयोग संग, समस्या हल हुनेछ। समयको राम्रो सदुपयोग हुनेछ।
कर्कट:- कार्य प्रणालीमा सुधार हुनेछ। व्यापारको गोपनीयता भगं नगर्नुहोस्। आपसी छलफल लाभदायक हुनेछ। पुरानो रोग फेरी बिग्रन सक्छ। बेचैनी हुनेछ। प्रयास सफल हुनेछन्। योजना बनाइनेछ। स्थिति सोचे अनुसार हुनेछ। पूँजी लगानी लाभदायक हुनेछ। ब्यापार चिन्तित हुनेछ।
सिंह:- आफ्नो स्थिति र क्षमता अनुसार काम गर्नुहोस्। आम्दानी घट्नेछ। ब्यापार ब्यवसायमा लाभ हुने सम्भावना छ। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ। परिवारमा कसैसंग विवाद हुन सक्छ। चोट, चो,री र विवाद आदि को कारण हा,नि सम्भव छ। जोखिम नलिनुहोस्। समस्यामा नपर्नुहोस्।
कन्या:- ब्यापार राम्रो हुनेछ। सम्मान बढ्नेछ। नयाँ सम्झौता हुन सक्छ। सफलता मिल्नेछ। सुख हुनेछ। पारिवारिक तनावका कारण मन विचलित हुनेछ। राम्रो आकार मा हुनुहोस्। नाफा घट्न सक्छ। यो उचित मार्गदर्शन लिन आवश्यक हुनेछ।
तुला:- सम्मान पाउनुहुनेछ। ब्यापार राम्रो हुनेछ। सुखको साधन जुट्नेछ। शत्रु पराजित हुनेछन्। सुख र पारिवारिक उन्नति हुनेछ। वित्तीय योजनामा ​​पैसा लगानी गर्न सकिन्छ। छिमेकीहरु संग मतभेद को संभावना छ। प्रयासहरु सफल हुनेछन्।
वृश्चिक:- पैसा हुनेछ। सुख हुनेछ। प्रतिष्ठा र प्रतिष्ठा बढ्ने सम्भावना छ। मनोरन्जन को अवसर उपलब्ध हुनेछ। अनावश्यक कुराहरुमा संलग्न नहुनुहोस्। कामको जिज्ञासा बढ्नेछ। आर्थिक स्थिति राम्रो रहनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ। कानुनी बाधा हट्नेछ।
धनु:- नाफाको अवसर हातबाट बाहिर जानेछ। शत्रु बाट होशियार हुनु होला । काम को लागी लापरवाही नगर्नुहोस्, केहि मामिलामा मतभेद को संभावना छ। शारीरिक पीडा को कारण बाधाहरु सम्भव छ। विवाद नगर्नुहोस्। तपाइँ दु:खद समाचार पाउन सक्नुहुन्छ।
मकर:- धनलाभ हुनेछ। जग्गा र भवनको योजना तयार गरिनेछ। रोजगारी पाउनुहुनेछ। काम र व्यापार को क्षेत्र मा विभिन्न बाधाहरु को कारण मन अशान्त रहनेछ। स्वार्थ र भोग को प्रवृत्ति को कारण, तपाइँ धेरै प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
कुम्भ:- आम्दानी बढ्नेछ। कुनै हतार छैन। स्वैच्छिक स्थानान्तरण र जागिर मा पदोन्नति को संभावनाहरु छन्। आत्म-अध्ययन को महत्व बुझ्नुहोस्। सन्तानलाई आफ्नो काममा सफलता मिल्नेछ। स्वादिष्ट खानाको आनन्द लिनुहोस्। विद्यार्थी वर्गले सफलता प्राप्त गर्नेछ। ब्यापार राम्रो हुनेछ।
मीन:- ब्यापार राम्रो हुनेछ। थकान हुनेछ। बुबाको स्वास्थ्यले सन्तुष्टि दिनेछ। अहंकार को भावना तपाइँको दिमाग मा प्रवेश नदिनुहोस्। व्यापार मा नयाँ योजनाहरु बाट लाभ हुनेछ। आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक रहनेछ। परिवार चिन्तित हुनेछन्। जीवनसाथी बाट सहयोग मिल्नेछ। कानुनी बाधा हट्नेछ।
प्रकाशित मिति २०७८ साउन २७ गते बुधबार ०१:१३